१० विधामा आईसीटी अवार्ड वितरण — Arthatantra.com
Arthatantra.com > प्रविधि > १० विधामा आईसीटी अवार्ड वितरण
काठमाडौं । १० विधामा चौथो संस्करणको आईसीटी अवार्ड २०१९ वितरण गरिएको छ । सूचना प्रविधि क्षेत्रको अग्रणी मिडिया लिभिङ विथ आईसीटीको आयोजनामा अवार्डको ग्रान्ड फिनालेमा विभिन्न १० विधामा अवार्ड वितरण गरिएको हो ।
‘सूचना प्रविधिमा सम्भावना र उत्कृष्टताको खोजी’ मूल नारासहित भएको अवार्ड कार्यक्रमका विजयीलाई शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल, पूर्वमन्त्री गणेश साह, पूर्वमन्त्री एवं सांसद महेश बस्नेत र अन्य विशिष्ट अतिथिले सम्मान गरेका थिए ।
१० विधाअन्तर्गत स्टार्टअप आईसीटी अवार्ड ई–डिजिटल नेपाल प्रालिले प्राप्त गर्न सफल भएको थियो । प्रडक्ट आईसीटी अवार्ड मेडिफ्लो सिस्टम एन्ड सर्भिसेसले प्राप्त गरेको थियो । राइजिङ स्टुडेन्ट प्रोजेक्ट अवार्ड पुल्चोक क्याम्पसका विद्यार्थीले विकास गरेको प्लाटफर्म ‘रक्तदान’ले हासिल गरेको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
यस वर्षको आईसीटी पायोनियर अवार्ड राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका अध्यक्ष एवं विकास अभियान्ता महावीर पुनलाई वितरण गरिएको हो । त्यस्तै, आईसीटी आन्टर प्रेनियर अवार्डबाट जानकी टेक्नोलोजीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अमित अग्रवाललाई वितरण गरिएको थियो ।
विदेशमा रहेर पनि नेपालको आईटी क्षेत्रमा उल्लेख्य योगदान दिने व्यक्तिलाई दिइने नेपाली डायस्पोरा आईसीटी अवार्ड प्रसिद्ध एआई कम्पनी फ्युज मेसिनका संस्थापक डा. समिर मास्केले प्राप्त गरेका छन् ।
आईसीटी अवार्डअन्तर्गत सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सूचना प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गर्ने सरकारी कार्यालयलाई दिइने डिजिटल गभर्नेन्स अवार्ड लोकसेवा आयोगले प्राप्त गरेको छ ।
त्यसैगरी, सूचना प्रविधिलाई अधिकतम प्रयोग गरी शिक्षण पद्धतिमा सुधार ल्याएको मूल्याकंन गर्दै नेपाल खुला विश्वविद्यालयलाई डिजिटल एजुकेसन आईसीटी अवार्ड वितरण गरिएको थियो ।
सञ्चारकर्मी विजय तिमिल्सनालाई मिडिया पर्सन आईसीटी अवार्ड वितरण गरिएको थियो । १९ प्रडक्ट तथा स्टार्टअपमध्ये किताब यात्रा प्रालिले पब्लिक च्वाइस अवार्ड–२०१९ प्राप्त गरेको छ ।
कार्यक्रममा स्व. कर्मठ डंगोललाई आईसीटी मरणोपरान्त सम्मान दिइएको थियो ।
२०७६ भदौ २ गते १२:१६ मा प्रकाशित
धादिङमा ट्याक्टर दुर्घटना, एक मृत्यु २० घाइते
हेर्नुहोस् ! करार शिक्षकको पछिल्लो सूचि (विषय र नामसहित)
अब अरूका नामको सिमकार्ड प्रयोग गर्न नमिल्ने, यस्तो छ टेलिकमको बाध्यकारी व्यवस्था